मधेशमाथि कुदृष्टि राख्नेलाइ जवाफदिन मधेश सक्षम छ, बामगठबन्धन ठगहरुको झुण्ड- उपेन्द्र – Sanghiya Online
मधेशमाथि कुदृष्टि राख्नेलाइ जवाफदिन मधेश सक्षम छ, बामगठबन्धन ठगहरुको झुण्ड- उपेन्द्र
Posted on : November 20, 2017 - No Comment
सप्तरी ४, मंसिर। संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धन ठगहरुको झुण्ड भएको टिप्पणी गरेका छन । झूठ बोलेर ठाग्ने र जनतालाई गुमराह गर्ने पार्टीहरु कम्युनिष्ट हुनै नसक्ने यादवले बताए ।
निर्वाचन क्षेत्र २ को छिन्नमस्ता गाऊँ पालिका वड़ा न. ३ गोविन्दपुरमा फोरम नेपाल र राजपाको संयुक्त सभालाई सम्बोधन गर्दै यादवले भने,- ‘वाम गठबन्धन मधेशसहित पूरै देशको लागि घातक छ । ढोंगको खोल ओडेका कम्युनिष्टहरुको असली चरित्र जनताले बुझ्न जरूरी छ ।’
अध्यक्ष यादवले सिंहदरबारले मधेशलाई देख्नै नचाहेको टिप्पणी गरेका छन । मधेशप्रति सिंहदरबारको नियत ठीक नभएको यादवले आरोप लगाए । यादवले भने,- ‘मधेशमाथि कसैले कुदृष्टि राख्ने दिन गयो । जुनसुकै विरोधी शक्तिलाई जवाफ दिन मधेश सक्षम र तयार छ ।’
मधेशमा बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गराई छाड़ने दाबी गरेका छन । त्यसका लागि मधेश गठबन्धनलाई विजय गराउन आम जनतालाई अपील गरेका छन ।
सोही कार्यक्रममा छिन्नमस्ता गाऊँ पालिकाको नेपाली कांग्रेसका संयोजक जिब्रील मियाँले फोरम नेपाल र राजपाको मधेश गठबन्धनलाई समर्थन गरेका छन ।
नेता मियाँले कांग्रेसको केन्द्रीय निर्देशन अनुसार यादवको पक्षमा मसाल चिन्हमा भोट हाल्न कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन ।
सप्तरीको निर्वाचन क्षेत्र न. २ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि उपेन्द्र यादवलाई कांग्रेसले यसअघि नै समर्थन गरिसकेको छ ।
नेपाली संग पैसा फालाफाल, तथ्याकं अनुसार चपाएरै फ़्याल्छन ४ महिनामा साढे १८ करोड रुपैयाँ
विजय रामको मृत्युको विषयलाई लिएर रौतहटको गरुडामा झडप, ६ जना घाइते ।
चिनियाँ राजदूत यान्छीको दबाब ! प्रचण्डलाइ भेटेको भोलि पल्टै माओबादी सरकारमा सहभागी
नेपालमा गरिने जासुसीमाथि विशेष निगरानी, कस्तो काम गर्ने व्यक्ति वा संस्था कारवाहीमा पर्छ ?
सप्तरीका पत्रकारहरुले प्रेस काउन्सिलमा समेत तालावन्दि गर्दै
हृदयाघातका यी हुन् अदृश्य कारण, डा.ओममूर्तिले दिए मुटु जोगाउने टिप्स
चिनसंगको सम्झौता रद्धले ओलीलाई लाग्यो मुटुमा चोट, चुनाबपछि सबै निर्णय उल्टाउने दाबी